आईपीओ आउन लागेको ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा १०७ प्रतिशतले बढ्यो, ईपीएस कति ? – जुगल टाईम्स
Posted on २९ बैशाख २०७७, सोमबार १३:२३ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
आईपीओ ल्याउने तयारीमा रहेको ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तिय संस्थाले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्म रु. ८ करोड ४६ लाख ६३ हजार खुद नाफा कमाएको छ । लघुवित्तले हालै सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
लघुवित्त यो नाफा गत आवको सो अवधीको १०७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सो अवधी लघुवित्तले ४ करोड ८ लाख २४ हजार खुद नाफा कमाएको थियो ।
हालसम्म लघुवित्तले रु. १ अर्ब ३० करोड ६८ लाख डिपोजीट संकलन गरेको छ । साथै, लघुवित्तले रु. ३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
प्रवाहित कर्जाबाट लघुवित्तले ९ महिनामा रु. ४७ करोड ८४ लाख ४० हजार व्याज आम्दानी गरेको छ । लघुवित्तको खुद व्याज आम्दानी भने १७ करोड ७० लाख ९५ हजार रहेको छ ।
हाल लघुवित्तको चुक्तापुँजी २५ करोड ९५ रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तले आफ्नो जगेडा कोषमा रु. १७ करोड १० लाख रकम जम्मा गरेको छ । वित्तिय विवरण अनुसार लघुवित्तको प्रति शेयर आम्दानी ४३.४९, मुल्य आम्दानी अनुपात २५.७५, प्रतिशेयर नेटवर्थ १६५.८८, तरलता अनुपात १३.२९ प्रतिशत र प्रति शेयर कुल सम्पत्तिमा प्रतिफल १८५६.७६ रहेको छ ।
Posted on १९ बैशाख २०७७, शुक्रबार १०:३६ Author जुगल टाईम्स
लकडाउन खुलेलगत्तै विदेशमा रहेका १० लाख युवाहरु नेपाल फर्कने भएकोले सरकारले केही तयारी नगरेमा स्थीति भयाबह हुने आंकलन गर्न थालिएको छ । रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका करिब ४५ लाख युवाहरुमध्ये १० लाख भर्खर पनि आउन चाहेको आंकलन यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले गरेका हुन् । ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिएको अवस्था वा चार्टर गरेर भएपनि […]